Tarika Mahaleo : Tsy afa-niatrika ny fampisehoana i Fafah -
AccueilVaovao SamihafaTarika Mahaleo : Tsy afa-niatrika ny fampisehoana i Fafah
11/06/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Anisan’ireo hetsika nisongadina ny faran’ny herinandro teo ny « Revy Gloum », niarahana tamin’ny tarika Mahaleo sy ny tarika Ikalavazo tetsy amin’ny tokotaniben’ny Esca tetsy Antanimena. Ho an’ny tarika Mahaleo, dia tsy afa-niatrika io fampisehoana io i Fafah. « Mitondra ny fialan-tsiny avy amin’i Fafah fa sendra ny tsy fahasalamana izy », araka ny fanamarihan’i Bekoto mialoha ny nanombohan’ny tarika ny anjarany. Na izany aza, dia nahavita niantsoroka tsara ny seho ireo akanga sisa nanamborana nahitana an’i Dama, Bekoto, Dadah ary Charles. Maro tamin’ireo mpijery no nahatsiaro ny fijerena ny tarika Mahaleo tany amin’ny taona 80 tany tamin’ny seho an-kalamanjana toa izao. Na vitsy aza ny mpijery, nahafa-po ny tolotra avy amin’ireo mpanakanto. Tsy nandiso fanantenana ihany koa ny seho nataon’ny tarika Ikalavazo, izay nindrana hirana mpanakanto maromaro nefa niangalian’izy telo mirahavavy tamin’ny endrika hafa sy gasigasy kokoa.
Tsy dia nahagaga loatra ny fahavitsian’ny mpijery tonga tamin’ny seho raha oharina amin’ny fitiavan’ny olona ny tarika Mahaleo. Hita taratra tamin’ny fomban’ireo mpikarakara ny tsy fahaizana mifehy ny serasera, satria dia mpanao gazety maromaro nampiseho ny karatra maha-mpanao gazety azy no voasakana sy tsy navelan’ireo mpikarakara hiditra. Ny mpanao gazety izay tsy hanam-potoana hijerena hatramin’ny farany ny fampisehoana misy fa mandalo manao ny asany fa tsy hijery fety.
Taorian’ny fandalovan’ny rivo-doza Enawo teto an-drenivohitra dia nidina an-tsehatra nijery ireo fahasimbana vokatr’iny rivo-doza iny teny amin’ny kaominina Soavina, teny amin’ny distrikan’Atsimondrano sy ireo fianakaviana tra-boina teny amin’ny Ans Ampefiloha ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady ...Tohiny